Nge-21 ka-Epreli i-Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Ngomhla wama-21 ku-Epreli iZodiac yiTaurus-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Ngomhla wama-21 ku-Epreli iZodiac yiTaurus-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Uphawu lwe-zodiac ngo-Epreli 21 yiTaurus.
Uphawu lweenkwenkwezi: Inkunzi. Umqondiso weBull Ichaphazela abantu abazalwe phakathi kuka-Epreli 20 noMeyi 20, xa kubuchwephesha benkcubeko yetropiki iLanga lithathwa njengeliseTaurus. Ibhekisa kubantu bomthonyama abanobuchule kodwa abakhaliphileyo kwaye bazithembe.
Inkqubo ye- IKhwezi leTaurus , Elinye lamaqela ali-12 e-zodiac abekwe phakathi kweAries eNtshona naseGemini eMpuma kwaye ububanzi bayo obungu-90 ° ukuya kwi-° °. Inkwenkwezi eqaqambe kakhulu yi-Aldebaran ngelixa lonke ulwakhiwo lusasazekile kwii-degrees ezingama-797.
Igama lesiFrentshi liyibiza ngokuba yiTaureau ngelixa amaTaliyane ekhetha eyabo iToro, nangona kunjalo imvelaphi yomqondiso we-zodiac ka-Epreli 21, iBull, yiLatin Taurus.
Uphawu olwahlukileyo: iScorpio. Oku kubalulekile kuba kubonakalisa umonde kunye nobukrelekrele bomthonyama baseScorpio ekucingelwa ukuba banazo zonke izinto ezizelwe phantsi komqondiso welanga weTaurus bafuna.
Ukuziphatha: Kulungisiwe. Oku kubonisa ukugxeka kunye novuyo kunye nendlela ezizodwa ezizalwe ngayo ngo-Epreli 21 ziyinyani.
Indlu elawulayo: Indlu yesibini . Esi sithuba sokuba nezinto kunye nazo zonke izinto ezixabisekileyo ebomini bomntu. Indibaniselwano neTaurus inokuphinda-phinda kabini umnqweno wakhe wokufumana izinto zobuqu kwimfesane yemali ukuya kwimigaqo yokuziphatha.
Umzimba olawulayo: UVenus . Le planethi yasezulwini ifanekisela ubunye kunye nemincili. IVenus ithathwa njengecala le-yin ngelixa uMars esecaleni le-yang. IVenus ikwacebisa malunga nesisa sobu buntu.
Isiqalelo: Umhlaba . Eli nqaku libandakanya ukusebenziseka kunye namandla anomdla wokulumka kubomi babo bazalwe phantsi komqondiso we-21 ka-Epreli.
Usuku lwethamsanqa: uLwesihlanu . Lo ngumhla olawulwa yiVenus, ke ngoko ujongana nokuzonwabisa kunye nemvisiswano. Iphakamisa imeko yesigulana sabemi baseTaurus.
Amanani anethamsanqa: 4, 8, 13, 18, 20.
Ulwazi oluthe kratya ngo-Epreli 21 Zodiac ngezantsi ▼
IMars kuMfazi onomhlaza: Mazi ngcono
Ukuhambelana kweGemini kunye ne-Aquarius kuthando, ubudlelwane kunye nesondo
loluphi uphawu ngo-Agasti 2
unyaka omtsha wamatshayina u-1972 uphawu lwezilwanyana
yintoni uphawu lwe-zodiac lwango-Agasti 14
yintoni uphawu lweenkwenkwezi ngoJulayi
Usuku lwam lokuzalwa ngoSeptemba 11
taurus eyindoda virgo eyimazi ehambelanayo